Nagu saabsan - Shandong Surmount Koofiyadaha Co., Ltd.
Shandong Surmount Koofiyadaha Co., Ltd. oo la aasaasay 2005 oo ku taal Rizhao City, magaalo xeebeed qurux badan oo ku taal Gobolka Shandong, Shiinaha. Maaddaama ay u dhowdahay dekedda Qingdao iyo dekedda Rizhao, gaadiidku aad ayuu ugu habboon yahay. Shirkaddayadu waxay leedahay qiyaastii 300 oo shaqaale ah oo daboolaya aag ka badan 13,000 mitir murabac ， oo leh raasamaal diiwaangashan oo ah 10 milyan iyo hantida joogtada ah ee jirta in ka badan 20 milyan. Shirkadeena waxay leedahay aqoon isweydaarsiyo casri ah, tasiilaad caawiyayaal ah, qalab wax soo saar horumarsan iyo xoog farsamo oo hodan ah.
Shirkadeena ayaa inta badan soo saarta koofiyadaha baaldiga, koofiyadaha buuraha, koofiyadaha baseball, koofiyadaha militariga iyo koofiyadaha, koofiyadaha isboortiga, koofiyadaha moodada, fiisooyinka iyo koofiyadaha xayeysiinta. Oo waxaan aqbali karnaa amarrada OEM iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Sababtoo ah naqshadaha cusub, qaababka moodada, shaqaynta horumarsan iyo alaabta ceeriin oo tayo sare leh, alaabtayada ayaa caan ku ah suuqa. Waxaa badanaa loo dhoofiyaa Kuuriya, Japan, Yurub iyo Mareykanka, waxayna ka heleen faallooyin wanaagsan macaamiisha tirada badan.
Waxaan ku adkeysaneynaa aragtida ganacsiga ee "Macaamiilku waa Ilaah, Tayada waa Nolosha", tixgalina "Is-dul-saar naftiisa; Dabagalka Sare-Sare" sida ruuxa ganacsiga, dammaanad-qaadka tayada heerka koowaad, iyo in la abuuro astaan ​​heerka koowaad ah. Waa rabitaanka dhammaan shaqaalaha shirkadeena inay qanciyaan macaamiisha.
Shirkadda si daacad ah u rajeyneysa inay kula-Win-win iskaashi aad la
Noqo soo saaraha koofiyadda iyo alaab-qeybiye
Raadinta heer sare, horumarsan iyo hal abuur leh, wadaagis kooban, macaamil marka hore, iskaashi guul-guul ah.
Daacadnimo, ixtiraam iyo xirfad, macaamiisha had iyo jeer waa sax.
Akhlaaqdu waa mudnaanta iyo rabitaanka in la bixiyo. Xamaasad, u heellan, iyo midnimo.
Natiijooyinka ayaa xoog leh, sababaha ayaa ah kuwa labaad.
Daacad noqo oo caqli yeelo.
Shaqo kasta qorshe ayey leedahay.
Qorshe kasta wuxuu leeyahay natiijooyin.
Natiijo kasta ayaa mas'uul ka ah.
Masuuliyad kasta waa in la baaraa.
Kormeer kasta wuxuu leeyahay abaalmarin iyo ciqaab.
Sida soo saaraha koofiyadaha xirfadeed, waxaan ka gudubnay shahaadada nidaamka tayada ISO9001，Aqoonsiga WRAP iyo qiimeynta awooda shirkadaha ee ay soo saartay Bureau Veritas, oo ah hogaamiye caalami ah qiimeynta waafaqsanaanta iyo adeegyada shahaadooyinka.